I-China yoNyango lwePhepha oluPhefumlayo olunokuphefumla abavelisi kunye nabathengisi | EMVA
1. Iteyiphu yesilika inezibonelelo zokuthamba kwaye zikhululekile, ukubambelela okuhle kulusu kunye nokukrazula ngokulula;
2. Ukuphefumla okungalukanga (iphepha) iteyiphu inamandla okuqina kwaye akukho lula ukuyaphula;
3. Iteyiphu ye-polyethylene (i-PE) ene-Perforated, kulula ukukrazula ngokulinganayo, kulula ukukrazula, ukukrazula imigca ngaphandle kokugqwetha;
Izinto eziphathekayo 100% Umqhaphu
Ubukhulu: 1.25 * 910cm
Beka ubomi kwishelufa Iminyaka emi-3
Yintoni iTape yeembaleki?
Izinto ezisisiseko zeteyiphu yokuncamathela ziindwangu ezingalukwanga zonyango, iphepha lonyango, ilaphu lomqhaphu e-elastic, ilaphu elicolekileyo lomqhaphu, ilaphu lesilika, ifilimu ejijekileyo ye-PE kunye nefilimu ye-OPP ngokulandelanayo yambathiswe ngonyango olushushu lokunyibilika koxinzelelo olunamathelayo okanye i-acrylic glue edityanisiweyo. Isetyenziselwa ukulungisa i-catheters okanye iinaliti zokufaka ngaphakathi kunye nokulungiswa kokunxiba xa unxiba amanxeba. Ingasetyenziselwa ukulungisa iiplasta ezahlukeneyo.
4. I-acrylic yonyango elungiselelwe ngokukodwa ukunamathela okubambekayo kunamathela ngokuqinileyo, ukubambelela okuhle kwasekuqaleni, ukubamba ukubambelela kunye nokubambelela okunzima, akukho mijikelo ijikileyo, akukho peeling, peeling ethambileyo kwaye egudileyo, kwaye akukho kukrazuka kolusu;
5. Iinkcukacha ezininzi ukuhlangabezana neemfuno zeklinikhi ezahlukeneyo.
Egqithileyo Isiguquli se-nebulizer kunye ne-CE ISO kunye ne-FDA
Okulandelayo: INSULIN PEN INALIDI